Macalinka Arsenal Oo War Farxad Leh U Sheegay Jamaahiirta Gunners | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Macalinka Arsenal Oo War Farxad Leh U Sheegay Jamaahiirta Gunners
Published on September 11, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(12-9-2018) Tababaraha kooxda Arsenal ee Unai Emery ayaa war aad u fiican u sheegay jamaahiirta kooxdiisa Gunners kadib markii uu qoraal kooban iyo hal sawir u soo dhigay bartiisa twitterka isla markaana uu dareen fiican bixiyay. Jamaahiirta kooxda Arsenal ayaa markiiba ka war helay warka fiican ee uu Emery u soo mariyay barta twitterka waxayna hal jawaab oo isku mid ah ku qeexeen sida uu warkani kooxdooda ugu muhiim ugu yahay.
Arsenal oo xili ciyaareedka Premier league laga guuldaro oo xidhiidh ahi ka soo gaadheen kooxaha Manchester City iyo Chelsea ayaa ka soo kabsatay iyada oo labadii kulan ee ugu danbeeyay soo guulaysatay waxayna jamaahiirta Arsenal rajaynayaan in horumarka kooxdoodu sii soco marka laga soo laabto kulamada caalamiga ah.
Unai Emery ayaa bartiisa twitterka soo dhigay sawirka ciyaartoyda kooxdiisa Gunners oo uu kula hadlayo xarunta tababarka wuxuuna sawirka sare soo raaciyay qoraalka ah: ” Waxaanu diirada saaraynaa horumarintayada, Arsenal waxay diirada saaraysaa Newcastle United”.
Laakiin markiiba jamaahiirta Arsenal ayaa ogaaday in warka fiican ee uu Unai Emery jamaahiirta kooxdiisa la wadaagay yahay in saxiixa cusub ee Lucas Torreira uu dib ugu soo laabtay tababarka kooxdiisa kadib markii uu dhaawac uga baxay kulankii xulka qarankiisu guusha ka gaadhay Mexico.
Lucas Torreira oo aad muhiim ugu ah kooxda Unai Emery ayaa laga saaray kulankii uu xulka qarankiisa Uruguay guusha 4-1 ka ahayd ka gaadhay Mexico waxaana la arkayay isaga oo barraf lugta u saaran yahay markaas oo ay jamaahiirta Gunners si wayn uga walwaleen in uu dhaawac ku maqnaan doono.
Laakiin markii jamaahiirta Arsenal ay arkeen in Lucas Torreira uu maanta ka soo xaadiray xarunta tababarka kooxdiisa waxay muujiyeen farxad wayn iyaga oo waliba fariimaha soo qoreen ku rajeeyay in uu taam buuxa u noqdo kulanka Newcastle United oo uu shaxda Emery ku soo bilaaban doono.
Tababaraha xulka qaranka Urugay ee Fabian Coito ayaa sheegay in sababtii uu badalka ugu saaray Lucas Torreira ay ahayd in uu ka taxadarayay in dhibaato kubka ah oo uu ka cabanayay Lucas Torreira ay sii xumaato wuuxuna yidhi: ” Waxaan u soo saaray Torreira ka taxadar ahaan”.
Lucas Torreira ayaa hadda la filayaa in uu diyaar buuxa u noqon doono kulanka ay Arsenal booqan doonto kooxda Newcastle United taas oo war fiican u ah Unai Emery iyo jamaahiirta kooxdiisa Gunners.